I-Cueva de los Verdes - Yini ongayibona, amanani, amashejuli nokunye okuningi | Ukuhamba kwe-Absolut
La Umgede Wemifino singakuchaza njengokungena enkabeni yomhlaba. Ngoba yisakhiwo noma umgede wentaba-mlilo, okwenze kwaba yindawo enkulu yokuheha izivakashi. Ngakho-ke akulimazi ukuyazi kancane bese uyibhala njengenye yezindawo okufanele sizivakashele okungenani kanye ezimpilweni zethu.
Uma ungaphakathi Lanzarote futhi ikakhulukazi eHaría, awusenazo izaba. Itholakala enyakatho yesiqhingi futhi njengoba sisho, uzothola umbukwane wasemhlabeni oyishubhu lentaba-mlilo. Uma ufuna ukwazi yonke into ebalulekile ekuvakasheni kwakho, ungaphuthelwa okulandelayo!
1 Iyini nokuthi yakhiwa kanjani iCueva de los Verdes
2 Ukusetshenziswa kokuqala komhume kanye nemvelaphi yegama lawo
3 Yini ongayibona kuCueva de los Verdes
4 Ama-Shcedule namanani
5 Imininingwane okufanele uyicabangele lapho uvakashela iLa Cueva de los Verdes
Iyini nokuthi yakhiwa kanjani iCueva de los Verdes
Njengoba sithuthukile, kumayelana i-grotto noma uhlobo lweshubhu ongena emhlabeni. Ngakho-ke uzoshiya ukukhanya kwelanga ngemuva ukuze ujabulele ingaphakathi lako. Yakhiwa eminyakeni engaphezu kwengu-5000 edlule, ngenxa yokuqhuma kwentaba-mlilo iLa Corona. Njengoba ama-lavas oketshezi ayedlula lapho amanye ayebumbene khona kakhulu, kwakhiwa le ndawo: Umgodi omkhulu.
Kungaba umgodi wokuthi umphumela ube yishubhu elingamakhilomitha ayi-7 ubude. Kumboza kusuka engxenyeni yentaba-mlilo esiyishilo kuze kufike endaweni esogwini. Ingenye yezide kakhulu emhlabeni. Kukuyo le ndawo engasogwini lapho sizohlangana khona nalabo abaziwa ngokuthi UJameos del Agua. Indawo yemvelo kepha lokho sekuyindawo yezokuvakasha namasiko.
Ukusetshenziswa kokuqala komhume kanye nemvelaphi yegama lawo
Yize manje sesishaqekile ukukubona, eminyakeni eminingi edlule ngisho nangaphezulu. Ngakho-ke bekulokhu kuyindawo lapho izinganekwane abasalanga ngemuva. Kepha naphezu kwazo, kuyiqiniso ukuthi yayinokusetshenziswa kwayo kokuqala ngohlobo lokucasha. Ngokusobala, izakhamizi zakuleyo ndawo azange liphuthe ithuba lokucasha ngokuhlaselwa abakutholile. Kwakungabaphangi ababehlala njalo esiqhingini futhi ngenxa yalokho, kwakukhona abantu abaningi ababesabela izimpilo zabo.
Ngakolunye uhlangothi, futhi kusiholela ekucabangeni nge imvelaphi yegama lakhe. ICueva de los Verdes ithatha igama lomndeni. Njengoba babengabanikazi bomhlabathi lapho wawakhiwe khona. Ngakho-ke, isibongo somndeni esishiwoyo sahlala. Kusukela lapho bekulokhu kunenye yezindawo eziyizifanekiselo, njengoba sibona.
Yini ongayibona kuCueva de los Verdes
Sesivele sifunde okuthe xaxa ngemvelaphi yayo, igama layo futhi manje sekuwukujika kwakho konke esizokubona kuyo. Ngesikhathi sama-60s kanye nama-70s amanye ukuthuthuka ngaphakathi kwegrotto ngamunye. Isibonelo, uhlelo lokukhanyisa ukuze ngalesi sinyathelo, luvakashelwe ngaphandle kwenkinga enkulu. Vele, njalo nomqondisi ozosichazela isinyathelo ngasinye.
Ukusuka lapho kwakhiwa ihholo, nezitendi zalo nobuhle obukushoyo lokhu. Njengoba ingxenye yesiteji nendawo ezungezile imbozwe ngamatshe futhi ingeze umfutho owengeziwe endaweni. Kepha hhayi lokho kuphela kepha futhi iqukethe amakhona ambalwa agqame ngangokunokwenzeka 'Umphimbo wokufa' noma 'igumbi lama-aesthetes'. Ukuvakashelwa okujwayelekile kule ndawo kuthatha cishe imizuzu engama-50, ngakho-ke bazolungela ukuthola ngalinye lamakhona ayo.
Njengezindawo eziningi ezinjengalezi, kumele njalo hlonipha uchungechunge lwezinhlelo futhi ukhokhe inani ukuze ukwazi ukungena kule adventure. Iqiniso ukuthi kuwufanele futhi okuningi. Njengoba ngaphandle kwamalungiselelo abawenzile ngesimo sehholo nokulandelana kwamalambu, kuyindawo okungafanele iphuthelwe. Ungavakashela ngasiphi isikhathi iCueva de los Verdes? Kusukela ngo-Okthoba 30 kuya kuJuni 10, amahora azoqala ngo-00: 18 kuye ku-00: 30. Ngenkathi isikhathi sasehlobo esiqala ngosuku lokuqala lukaJulayi kuya kuSepthemba 10, amahora aso aqala ngo-00: 19 kuye ku-00: 9,50. Abantu abadala bazokhokha ama-euro angama-12, kuyilapho izingane ezineminyaka engama-4,75 ubudala, ama-2 euros. Zonke izakhamizi eLanzarote zizokhokha ama-euro ama-XNUMX kuphela.
Imininingwane okufanele uyicabangele lapho uvakashela iLa Cueva de los Verdes
Uzohlala uhamba nomhlahlandlela ozokukhombisa amaphuzu ayisihluthulelo futhi uzokutshela zonke izinhlobo zolwazi. Ngakolunye uhlangothi, kufanele kuqashelwe ukuthi akuyona indawo efanelekile yabantu abanokuhamba okuncishisiwe. Njengoba inezingxenye ezinokukhuphuka nezitebhisi ezinezitebhisi, yize zibhalwe uphawu futhi zinezibambo zokubamba. Kepha sizofika endaweni engajwayelekile emincane futhi kufanele sigobe phansi ukuqhubeka nomkhondo.
Ngaphakathi kunamazinga okushisa anethezekile impela. Kugcina cishe 20º unyaka wonke, ngakho-ke kungenye yemininingwane okuhlala kulula ukuyazi lapho sivakashela lolu hlobo. Ukuhlanganiswa kwemibala emazingeni agqagqene kuzoba ngomunye wemibukiso ongeke wayiphuthelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Umgede Wemifino
Izindawo zokuthenga eziyishumi eziphezulu e-United States